Iindlela ezintlanu zeSurefire zokuphucula ukuGuqula amajelo eendaba | Martech Zone
NgoLwesine, Agasti 2, 2018 NgoLwesine, Agasti 2, 2018 Rekha Pant
Ngaphandle kokuthetha ukuba eyona ndlela isebenzayo yokufikelela kunye nokwenza unxibelelwano lweemvakalelo nabathengi abanokubakho kukusebenzisa imidiya yoluntu. Umntu unokufumana amawaka ezigidi zabasebenzisi kumaqonga amajelo eendaba ezentlalo; iya kuba yinkunkuma enkulu ukuba ungasebenzisi eli thuba lihle kangaka. Ezi ntsuku zimalunga nokufuna ukubonwa, ukuviwa, kunye nokuziva, yiyo loo nto phantse wonke umntu esiya kwiiakhawunti zakhe ukuze akhuphe ezabo iingcinga.
Umntu kufuneka awaqonde ngokupheleleyo la maqonga eendaba ezentlalo ukuze eze nesicwangciso esonyusa ukuguqulwa. Inokukhathaza kakhulu kwasekuqaleni kuba kuthatha ixesha ukuba iziphumo ezilindelekileyo zenzeke. Olona hlobo kuphela lokuhamba ngalo kukufunda ukuba amaqonga asebenza njani kwaye uza nesicwangciso sekhonkrithi ngaphambi kokuchitha amawaka eedola kwimikhankaso ekufuneka isilele.
Ihlabathi elikwi-intanethi lityebile ngolwazi ngendlela yokunyusa ukugcwala kwimithombo yeendaba zentlalo kunye neenguqulelo kodwa ngokubona indlela ezinokuba nzima ngayo ebantwini, sayinciphisa ukuya ezintlanu. Masiqale ibhola eqengqelekayo:
Dlala ngezinto eziBonwayo
Kukho ingqiqo emva kwekliki, "umfanekiso upende amagama aliwaka". Yonke into yenzeka ngokukhawuleza kwezi ntsuku kwaye abantu abasenawo umonde wokugqiba ukufunda isincoko eside. Bayayifuna ngokukhawuleza, kwaye enye indlela yokwenza oku kukubonwa. I-infographics, imiboniso, iividiyo, iifoto zibonakalisiwe ukuba zifumana ukubonwa okungaphezulu kwama-94% kunye nezabelo ngokuthelekiswa nomxholo onezinto ezibonakalayo. Ngaba uyazi ukuba yintoni elula ngakumbi ngokubonakalayo kwezi ntsuku? Awudingi ukuba yingcali kwaye ungazenza nje ngoncedo lwe izixhobo zemifanekiso ekwi-intanethi. Ukubonwa kuyasebenza ekufumaneni ingqalelo yomsebenzisi okwi-Intanethi, yiyo loo nto ingongoma iyonke ingo.
Chonga ekujoliswe kuko
Inxalenye yokudala umxholo ofanelekileyo ukuba ucofe iqhosha lesabelo kukuchonga ukuba ngoobani aba kujoliswe kubo. Iiseti zamagama ezahlukeneyo zibhenela kubantu abavela kubakaki bobudala obahlukeneyo, ubuchwephesha, kunye nomdla, yiyo loo nto kubalulekile ukuba wazi aba bantu. Abantu baneendawo ezithambileyo zamashishini abanokuthi baphinde bahlangane nawo, kwaye enye indlela yokwenza oku kukuthetha ulwimi lwabo. Ubunzulu bokuqonda kwabaphulaphuli, kokukhona kuya kuba lula ukwenza umgangatho ophezulu, okwabelana ngomxholo ofanelekileyo.
Izimangaliso zeNkxaso yabaThengi
Ukufumana ingqalelo yabathengi yenye into, kodwa ukwazi ukuba kukho abantu abakulungeleyo ukubanceda nokusombulula iingxaki zabo yenye yeendlela zomlilo eziqinisekileyo zokufumana uguquko. Zininzi iinkonzo zemiyalezo ezivumela amashishini ukuba akwazi ukunxibelelana nabaphulaphuli abakwi-intanethi kwinqanaba lomntu. Abantu bayacinywa ngokulula xa imibuzo yabo ingaphendulwa yiyo loo nto bekhetha iinkampani ezithatha ixesha lokuphendula imibuzo yazo. Kukho iindlela zokuzenzekelayo iimpendulo, umntu kufuneka alumke xa esenza le ndlela kuba inokucima umthengi ngakumbi xa iimpendulo zingenzelwanga okanye zivakala ngathi zivela kumatshini.
Ukucofa amaqhosha alungileyo
Uguquko luqhagamshelwe ngokuthe ngqo kumaqhosha okubizela-isenzo. Nokuba ungumxholo mhle kangakanani, ukuba umthengi onokubakho akakwazi ukufumana iqhosha lokufowuna, intsingiselo ayizukwenzeka. La maqhosha akhawulezisa umkhondo wentengiselwano ekhuselekileyo kunye engenamthungo, nokuba yinto elula njengokuya kwiwebhusayithi yenkampani okanye ukuthenga imveliso. Inkqubo efuna amanyathelo amaninzi inqunyelwe ukuba icofe kanye kuphela yiyo loo nto la maqhosha kufuneka abe phezulu phezulu kuluhlu lokuphambili xa uza nesicwangciso-nkqubo seendaba zentlalo.
Yazi Into Oyithethayo
Enye indlela yeqhinga lokubeka phezulu kwiziphumo zokukhangela kukusebenzisa amagama aphambili. Olu ncedo lonyusa umgangatho wewebhusayithi ophendlayo, kwaye yinto ebalulekileyo kwintengiso yokukhangela ehlawulelweyo. Kwimeko kwinqanaba: ii-hashtag. Oku kubalulekile ekwenzeni umxholo ubonakale kuba utsala abalandeli kunye nabangengabo abalandeli, kwaye banokukhokelela kubathengi abanokubakho kwiwebhusayithi yenkampani kwaye bathenge imveliso.
Ukukhuthaza ukuguqulwa konke malunga nokuhambelana, ukuqonda okunzulu kweqonga leendaba ezentlalo, ukubonisa ukuba ngabaphi abajolise kubo, nokwazi ukuba ngawaphi amagama okanye imifanekiso oza kuyisebenzisa. Abantu bayakhawuleza ukwabelana ngomxholo abanokunxibelelana nawo, ke kungcono ukongeza into yomntu okanye yeemvakalelo kumxholo. Bakhwele.
tags: guqukaImidiya yokuncokolaimbonakalo